Hogamiye Qoor-Qoor waxa uu Muqdisho ka bilaabay kulamo…
Galmudug State President Appoints New Commissioner For…
Hogamiyaha DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor oo ku sugan Magaalada Muqdisho waxa uu bilaabay kulamo siyaasadeedyo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka, isbadalka degdega ah ee ku yimid Xukuumadda Khayre, Shirka Dhuusamareeb 3, aragtida xulitaanka Ra’iisul wasaaraha cusub ee Dalka.
Qoor-qoor waxa ay wararku sheegayaan in kulan la qaatay Hogamiyaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana maanta sii soconaya kulamada kale ee labada dhinac ku ballansan yihiin.
Ilo ku dhaw kulanka waxa ay Axadle u sheegeen in looga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan isbadalka ku yimid Xukuumaddii Xasan Cali Khayre ee hormuudka ka ahayd shirarkii uu martigeliyay Qoor-Qoor ee looga hadlay xaaladda siyaasadeed, Doorashada, isu soo dhaweynta heer federal iyo heer Dowlad Goboleed iyo qodobo kale.
Lama soo bandhigin ilaa haatan haddii ay ku heshiiyeen qodobada muuqda iyo dadka daahsoon, sidoo kale kulamada ayaa lasii joogteyn doonaa sida Axadle ay u sheegeen ilo xog ogaal ah oo ku dhaw kulanka dhexmaray Hogamiyaha DFS iyo Axmed Qoor-Qoor Hogamiyaha DG Galmudug.
Hogamiyaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga sugayaa magacaabista Ra’iisul Wasaaraha cusub ee dalka, si uu usoo dhiso Gole Wasiiro oo ka gudbi kara caqabadaha ay u weyn tahay Doorashada Dalka.
axadle 3908 posts
Khatarta Lewandowski, Dhawacii Lionel Messi & Dembele…